PCB, PCBA, Control Board PCBA, Power Tụkwasịnụ PCBA, Industrial PCBA - CEG
Njikwa Kọmputa PCBA
Ike Tụkwasịnụ PCBA
Ike Production ikike
Ngwongwo di elu
High pụrụ ịdabere Testing
Top Quality Ihe
Anyị nwere ike izute niile nke gị prototype mkpa, karịsịa na n'ji ngwá electronic, instrumentation njikwa na ọgwụ na akụrụngwa. Anyị ukwuu zụọ engineering na nkà rụọ ga-hụ imewe nkọwapụta conformance na production.Creat Ad ...
Anyị na-eji anyị suppliers iji nweta continous eri Mbelata, na mgbakwunye na-eme creat asọmpi mbụ anyị na-enye. anyị egwu na mpaghara uru na China, ifịk ifịk ịzụlite anyị sourcing eme, na-enyere ndị ahịa anyị na-ahọrọ mmiri na ...
Creat bụ onye na-eje ozi nkwekọrịta electronics n'ichepụta ụlọ ọrụ nke awade zuru ezu ngwọta maka E Bipụtara Circuit Board Assembly. Ị na-elekwasị anya na gị na isi azụmahịa. Anyị na-elekwasị anya na mbenata gị akwụ ụgwọ, ọsọ gị ngwaahịa n'ahịa na ...
Tọrọ ntọala na 2004
Anyị pụrụ iche akụkọ ihe mere eme enyerela anyị aka ịghọ ihe anyị dị taa. Ọ gbanyere mkpọrọgwụ na na anyị, a na-elekwasị anya nkà na ụzụ, a ahuhu n'ihi na-aga n'ihu mma na a omenala dabeere Ụkpụrụ na ikike nke ndị mmadụ.
2013 , guzobere ọrụ center na Dongguan obodo, megharia esenidụt ahịa, zuo, R & D, ego ngalaba Dongguan.
2010 , guzobere creat Electronic Group Co., Ltd. na HK. Dịkwuo R & D ọrụ na sourcing ọrụ, malitere mụbaa esenidụt ahịa.
2004 , guzobere SMT factory Jasya na Shenzhen. Isi ahịa bụ anụ ụlọ PCB Assembly ọrụ.
Otu nkwụsị ọrụ
PCB & PCBA rụpụta
Kọmputa ngwaahịa ndụmọdụ
Ekwentị: + 86-18046980406
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Medical Equipment Pcbpcba , Medical Control PCBA Assembly , Medical Devices multilayer PCB , Industrial Control PCBA , Dugara Power Control PCBA Board , Intelligent mkpu Pcba ,